Thursday October 08, 2020 - 14:03:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa maanta Magaalada Muqdisho kula kulantay 100 Arday oo ay Hormuud Salam Foundation kafaala qaaday waxbarashadooda.
Munaasabada oo ka dhacday xarunta jamciyada waxbarashada SOHEDA ayaa loo qabtay boqolkan arday oo waxbarashadooda ay Hormuud Salaam foundation kafaala qaaday ayaa waxaa ka qaybgalay Arday, waalidiin, marti sharaf, Xildhiban Yuusf Xeyle aasaasaha Jamciyada waxbarashada SOHEDA iyo Gudoomiye ku xigeenka Hey’ada Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi.
Hay’ada Hormuud Salaam Foundation waxay sanad waliba taakuleysaa oo deeqwaxbarasho ka bixisaa 100 arday oo agoomo ah, iyadoo deeqdaas waxbarasho loo marsiiyo Jimciyada Waxbrashada SOHEDA. Sidoo Kale aasaasaha Jimciyadda waxbarashad SOHEDA,
Xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale ay sheegay in laga soo bilaabo markii la aasaasay Jimciyadda SOHEDA ay Shikadda Hormuud garab taagneed, wuxuu sidoo kale xildhibaanka xusay in marka laga soo tago 100 arday ay kafaala qaaday Hay’ada Hormuud Salaam Foundation, in ay jiraan arday kale oo jaamacad laga bixiyo oo ku sugan dalka suudaan.
Guud ahaan kaalmada sanad waliba la siiyo Jimciyadda SOHEDA waa $24,000 oo isug jirta, deeqda waxbarasho iyo arimo kale oo gargaar ah Boqolkan Arday oo ay Hay’adda Hormuud Salaam Foundation wax barashadooda kafaala qaaday ayaa isugu yar aqoon iyo caruur ka soo jeeda qoysas danyar ah waxaana laga bixiyaa qarashkaadka waxbarashada dhan Dugsiga hoose dhexe sare ilaa heer jamacadeed
Xildhibaan Yuusuf Xeyle ayaa ku amaanay oo goobta ka hadlay ayaa boggaadiyay doorka Hormuud Telecom, ay ku leedahay bixinta deeqaha waxbarasho, isagoo maamulka ku ammaanay inay culeys badani ka dul qaadeen qoysas fara-badan isagoona ardayda uu nasiibka u hiiliyay kula dardaarmay in ay ka faa’iideystaan fursadda waxbarasho ee ay maanta haystaan.
Guddoomiye ku xigeenka Heyada Hormuud Salaam foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi ayaa dhankiisa sheegay in shirkaddu sii wadi doonto fursadda waxbarasho, ee ay siinayso bahda waxbarashada, si ay uga faa’iideystaan kuwooda aan awoodin bixinta qarashaadka waxbarashada
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay waalidiinta caruurtooda laga bixiyo qarashka waxbarashada ayagoo u mahad celiyay hormuud Salaam Foundation iyo Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale.
Weeraro khasaara dhaliyay oo lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan Gedo iyo Sh/dhexe.
Al Shabaab oo weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigga ciidanka Puntland ee Galgala.
Weeraro lagu qaaday saldhigyada ciidamada Shisheeye ee Xudur iyo Hoosingoow.